ज्योतिष शास्त्रः विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/ज्योतिष शास्त्रः विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ?
जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज विहीबार, विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ
तपाईको धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र निकै कम । बिहीबार जन्मेका मानिसहरुको प्रेम विवाह हुने सम्भावना अधिक रहन्छ उनीहरुको वैवाहिक जीवन सुखमय हुने गर्दछ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विहीबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरैजसो सानो–तिनो रोगको शिकार हुने गर्दछन् जस्तै ज्वरो, पेट दुखाई अथवा टाउको दुखाईको समस्या देखिन सक्छ ।
सूर्यवंशी’का निर्माताले मागे प्रदर्शकसँग ७० प्रतिशत शेयर